तीन वर्षपछि कोठीबाट भागेर आउँदा... | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
तीन वर्षपछि कोठीबाट भागेर आउँदा...
असार २०, २०७८ आइतबार १६:५८:२३ | इन्द्रसरा खड्का
घरजमसँगै सुरु भएको घरेलु हिंसा
कोठामा बस्दा पैसा नहुँदा श्रीमान् रानीसँग झर्केर बोल्न थाले । रानीले बच्चा जन्मेको एक वर्षपछि काम खोजिन् । उनले जमलको बुक कारखानामा काम पाइन् । त्यहाँबाट आएको पैसाले रानीको श्रीमानले रक्सी खान थाले । रानीले अर्को काम पनि सुरु गरिन् । बिहान कारखाना र दिउँसो अस्पतालमा सरसफाइको काम गर्थिन् । दुई ठाउँमा काम गर्नुपर्दा रानीको बिहान ६ बजेदेखि दिउँसो तीन बजेसम्म घरबाहिरै रहनुपर्‍याे । रानी काममा जाँदा श्रीमानले शङ्का गर्न थाले । त्यसपछि सुरु भयो रानीमाथि घरेलु हिंसा ।
कहिले रक्सी खाएर कुट्ने, कहिले पैसा नदिएको भन्दै कुट्ने गर्थे । श्रीमानले मार्ने धम्की पनि दिन थाले । रानी काममा जान नसक्ने अवस्थामा पुगिन् । यसरी उनको आशा भरोसा टुट्न थाल्यो । जीवन अन्धकार लाग्न लाग्थ्यो । त्यही क्रममा एकदिन जान्द्रे नामको व्यक्तिले उनलाई फोन गर्‍याे ।
जान्द्रेले उनको फोन नम्बर कसरी पायो उनले थाहा नै पाएनन् । जान्द्रे र रानीको थर एउटै भएकाले उसले भाञ्जी भनेर बोलाउँथ्यो । रानी आफ्नो मनको पिर पोख्न मामा पाएकोमा मख्ख परिन् । केही समयपछि जान्द्रे रानीका श्रीमानसँग कोठामा आउने–जाने पनि गर्न थाल्यो । उनीहरू एकअर्कालाई साथी जस्तै व्यवहार गर्थे । श्रीमानसँग भएको झगडा जान्द्रेलाई राम्ररी थाहा थियो ।
तीन वर्षअघिको कुरा हो, जान्द्रेले रानीलाई श्रीमानको कुटाइ सहेर बस्नुभन्दा अर्को काम गर्न सल्लाह दियो । उसले आफैँ राम्रो काम खोजिदिने वाचा गर्‍याे । श्रीमान्को कुटाइबाट पीडित रानीलाई उसको कुरा सही लाग्यो । ​जान्द्रेले रानीलाई सारीमा बुट्टा भर्ने काम खोजिदिएको बतायो । ‘खान/बस्नसहित राम्रो पैसा दिन्छ, यस्तो श्रीमानसँग बस्नु भन्दा उतै गएर काम गर्दा राम्रो हुन्छ । म तिमीलाई काम खोजिदिन्छु भन्यो, मैले पनि हुन्छ भनेँ । के थाहा उसले त मलाई दिल्ली पुर्‍याउने योजना बनाएको रहेछ’, रानीले त्यो क्षण सम्झिइन् ।
रानी जहाँ पुगिन्, त्यहाँ अचम्म देखिन् । ठूलो फल्याट थियो । स–साना केटीहरूदेखि लिएर युवतीहरू बसेका थिए । उनीहरूले लगाएको लुगा, गरेको सिङ्गारपटार अर्कै थियो । उनलाई यस्तो कस्तो काम होला जहाँ चिटिक्क परेर बस्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै ती महिलाले रानीलाई पनि तयार हुन लगाइन् । ‘काम गर्न किन यति सिङ्गारपटार गर्नुपर्छ होला भनेर मैले ती महिलालाई सोधेँ– राम्री बनेर गर्ने कस्तो काम हो ? अनि उनले अब तैँले धन्दा सुरु गर्नुपर्छ भनिन् । मलाई धन्दा भन्ने नै थाहा थिएन । कस्तो, के काम हो भन्ने लाग्यो । पछि थाहा पाएँ मैले त त्यहाँ आउनेसँग यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ’, रानीले भनिन् ।
त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै रानीले त्यस्तो काम गर्दिनँ भनेर रोइकराइ गरिन् । तर जालमा परिसकेपछि कसरी उम्कन पाइन्थ्यो र ! मन नभइ–नभइ पनि काम गर्न तयार हुनुपर्‍याे । ‘एक हप्तासम्म खाना नखाएरै बसेँ, त्यो काम गर्न तयार भइनँ । शरीर निलडाम हुने गरेर पिट्यो । तँलाई किनेर ल्याएको हो, काम नगरेर हुन्छ भन्दै पिट्दै मेरै आँखा अगाडि एउटा केटीलाई तीन/चार दिनसम्म खाना खान नदिएर कोठामा थुनेको र मारेर फालेको पनि देखेँ । यो देखेपछि मेरो अगाडि कुनै उपाय नै भएन बाध्यताले त्यो काम गर्न स्वीकार गरेँ’, रानीले आफ्नो विवशता सुनाइन् ।
कोठीमा रात होस् या दिन । जतिबेला ग्राहक आए, त्यति बेला तयार हुनु पर्थ्याे । एकै दिनमा ३० भन्दा धेरैलाई खुसी पार्नु पर्थ्याे । ‘यी कुरा कसरी तपाईँलाई सुनाऔँ, कति पीडा हुन्थ्यो, सकिनसकी पनि काम गर्नै पर्थ्याे’, रानीले आफूले पाएको दुःख सुनाइन् ।
कोठीभित्र के रात के दिन थाहा हुँदैन थियो । बाहिर घाम लागेको छ कि, पानी परिरहेको छ पत्तो हुँदैन । मात्र थाहा हुन्थ्यो ग्राहकको समय । कहिलेकाहीँ यसो झ्यालबाट बाहिर हेर्न खोज्दा मालिकनीले गाली गर्थिन् ।
दिनहुँ २०/३० जनासँग सम्पर्क गर्दा कति पटक बिरामी हुन्थिन् । औषधी खाएर, सुइ लगाएर पनि काम गर्नु पर्थ्याे । ‘बेला–बेलामा कोठीमा प्रहरी आउँथे । प्रहरी आएको बेला भागाभाग हुन्थ्यो । जमिनमुनि पनि कोठा बनाएको हुँदो रहेछ । प्रहरी आएको बेला धेरै पटक हामी त्यहीँ लुक्यौँ’, उनले भनिन् ।
दिनहुँको धन्दाले रानी पटक–पटक बिरामी भइन् । बिरामी भए पनि औषधि खाएर काम गर्नु पर्थ्याे । रानीलाई सेतो पानी बग्ने, पेट दुख्ने समस्या भयो । पछि बेस्सरी रगत बग्न थाल्यो । अस्पतालमा गएर जाँच गर्दा टीबी भएको थाहा भयो । एक दिन रानी अस्पतालमा बसिरहेकी थिइन् । अर्की महिला आएर कुरा गर्न थालिन् । उनी नेपाली बोलेको सुनेपछि रानी पनि बोलिन् ।
रानीको दाइलाई भारतमा बस्न र भेट गराउन ती नेपाली महिलाले सहयोग गरिन् । नेपालबाट भने परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल संस्थाले रानीका दाइलाई भारत पठाउन सहयोगका लागि दिल्लीमा रहेको संस्थासँग समन्वय गर्‍याे । नेपाली महिला र परिवर्तनका लागि सहकार्य नेपाल संस्थाको सहयोगमा रानी गएको जेठ १४ गते त्यो कालकोठरीबाट भागेर नेपाल फर्कन सफल भइन् ।
जान्द्रेको नाममा उजुरी
नेपाल फर्केपछि उनले दिल्लीमा लगेर बेच्ने जान्द्रेविरुद्ध उजुरी दिएकी छिन् । गएको जेठ १५ गते बबरमहलमा रहेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा रानीले उजुरी दिएकी हुन् । जान्द्रेको फोन नम्बर र फोटोसहित उजुरी दिएकाले ऊ पक्राउ पर्नेमा रानी विश्वस्त छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘फोटो दिएको छु । नम्बर पनि छ, प्रहरीले चाह्यो भने उसलाई सजिलै पत्ता लगाएर पक्राउ गर्न सक्छ । सरकारले बेचबिखन गर्ने हरेकलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँमा छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ र बेचबिखन हुनबाट बचाउनुपर्छ ।’